Ụbọchị My Pet » 4 Ike àgwà Obi ụtọ na Mmekọrịta
Ò nwetụla mgbe ị iwere oge ịtụgharị uche n'ụzọ àgwà gị ihe nakawa etu esi metụta ịhụnanya gị ndụ ka mma ma ọ bụ ka njọ? E nwere ihe ndị ị na-eme onkonshiosli na mmetụta mmekọrịta gị n'ụzọ dị mma, dị nnọọ ka e nwere ụfọdụ eme nke ghọrọ ụfọdụ ụdị abụọ ọdịdị gị, ma ụgbọala onye gị na akụ. Ezie na ndị mbụ bụ iji chebe, ị pụrụ ịtụle ịlụ Bibie nke abụọ ụdị àgwà na-egosipụta omume ụfọdụ nanị obi ụtọ mmekọrịta ọma ghọọ a àgwà.
1. Emeso onye gị na-akwanyere
Nkwanye Ùgwù bụ ihe mgwa ọ bụla mmekọrịta kwesịrị inwe, ma anyị na-ekwu okwu banyere ụlọ akwụkwọ sekọndrị fling, otu onye n'abalị guzoro ma ọ bụ a ukporo mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Imeso onye gị na-akwanyere na-aghọ nke kasị mkpa mgbe a oké njọ mmekọrịta, karịsịa ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọ ghọọ a ndụ na-adịgide adịgide na alụmdi na nwunye. Igosi nkwanye ùgwù nhata n'igosi ịhụnanya, dị nnọọ ka ọ bụghị n'imeso onye gị na-akwanyere pụtara n'ezie na-ekwupụta gị iwe, gị enweghị ntụkwasị obi ma ọ bụ nabata.
Banyere onye gị pụtara na-egosi ha na ị hụrụ ha n'anya n'ihi ndị ha na-. Ị nwere ike dị iche iche echiche na ndụ, ma nke a apụtaghị na ị nwere ikike na-akparị ya / ya. Nke a bụ ihe ị ga na-n'uche karịsịa mgbe abụọ nke unu na-ekwekọrịtaghị na ihe. Ịlụ ọgụ, ọbụna ihe ndị kasị nta ndị, bụ oge mgbe di na nwunye na-echefu ha bụ n'ezie a otu na-akpa àgwà dị ka ndị dị otú ahụ.
2. Gaa maka ejegharị aka na aka
Nke a na-agwa ga-a nnukwu mmetụta na gị na ọnọdụ, na ike gị nakwa dị ka mmekọrịta gị. Ọ bụ ohere na-imega tupu ma ọ bụ mgbe a sedentary ụbọchị n'ụlọ ọrụ na ohere na-emefu ụfọdụ àgwà oge dị ka di na nwunye. Ije Ije aka na aka na-akwalite mma mkparịta ụka dị ka ọ bụ na oge ị ọma na-agbaji gị kwa ụbọchị na ọrụ ụlọ na ikpochapụ gị isi ọnụ.
3. Wepụta mgbede ọnụ efep TV
Ikiri TV pụrụ ịbụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu (ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ n'ime ihe niile) mapụtara oge ọrụ, ma n'ezie ọ dịghị enyere gị aka dị ka otu di na nwunye. The TV n'ezie na-adọta niile anya, eme ka a nkwurịta okwu stopa. Olee otú ị pụrụ ikekwe jikọọ na onye ọ bụla ọzọ na-ekiri TV? Olee banyere gbanyụọ TV (dịkarịa ala site n'oge ruo n'oge), na-anọ ụfọdụ àgwà oge dị ka di na nwunye? I nwere ike ikwu banyere ụbọchị gị, ị pụrụ snuggle na sofa, na-echeta gị ụbọchị mbụ ma ọ bụ atụmatụ gị ọzọ ezumike. Ihe ọ bụla na-elekwasị anya na unu abụọ na-aga.
4. Mee mma mmegharị maka onye gị na
Olee otú ihe na-eweta kọfị na di gị n'ụtụtụ? Ma ọ bụ na-akpọ ya na nne ya maka Ntụziaka na nri kasị amasị ya na nwata efere? Olee banyere ịzụ enyi gị nwanyị ya mmasị achicha? Ma ọ bụ ọbụna mma, mmiri ya maka ya? Ọ na-adịghị ga-abụ ihe nnukwu. Obere mma mmegharị kwupụta mmetụta gị nke ịhụnanya na nkwanye ùgwù. Ịhapụ deturu maka onye ọ bụla ọzọ ma ọ bụ texting na ị na-atụ uche ya / ya mgbe a na mgbe na-àgwà nke pụrụ mmetụta n'ụzọ dị mma mmekọrịta gị.